Miaraka amin'ny mpikambana vaovao vaovao ny Design Hotels ™
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miaraka amin'ny mpikambana vaovao vaovao ny Design Hotels ™
Rehefa mamatotra tsipìka amin'ny taona ny Design Hotels ™, dia manao izany miaraka amin'ny fanampian'ny hotely vaovao misy mpikambana fito isika izay manerana ny tany - toy ny hatrizay, tafakambana amin'ny foto-kevitra fakan-tahaka. Manomboka amin'ny renirano Douro any Portiogaly ka hatrany amin'ny faritra lavitra any Shina, mankanesa miaraka aminay amin'ny fankalazana ny herintaona voafaritra tsara miaraka amin'ireto fanehoana ny fahaiza-mamorona mifototra amin'ny toerana ireto.
Napetraka tamim-boninahitra teo amoron'ny renirano Douro mahafinaritra, ny fifanakalozan-kevitra nifanaovan'i Douro41 teo anelanelan'ny vato sy ny tany, ny renirano ary ny tranobe, dia mahatadidy ny minimalism amin'ny tanimboaloboka nentim-paharazana nefa mbola ampitomboina amin'ny vera izay manasongadina ny fomba fijeriny. Amin'ny maha-mpikambana Design Hotels ™ azy irery any Toronto, ny tanàna kanadianina cosmopolitan dia hita taratra amin'ny The Drake Hotel. Andrimpanjakana iray manana ny maha izy azy, trano fandraisam-bahiny misy efitra 19, iray dia faritana amin'ny alàlan'ny mozika mivantana, ny fahasalamana ary ny atrikasa famoronana, fotoam-pivarotana, lahateny amin'ny artista, yoga ary maro hafa. Ny fihazakazahana mankany amin'ny morontsiraka andrefana amerikana izao dia midika fitsaharana amin'ny morontsirak'ireo morontsiraka Kalifornia any Timber Cove Resort.
Ny fanavaozana lehibe dia manasongadina tokoa ny taolam-pananganana kanto sy ny fanahy kanto. Ny atsimo kokoa, ao afovoan-tanànan'i León, Casona tamin'ny taonjato faha-19 dia novana ho Hotel Emiliano. Notehirizin'ny National Institute of Anthropology and History, ny trano fandraisam-bahiny dia mitazona ny ankamaroan'ireo singa tany am-boalohany mahavariana toa ny patio miaraka amin'ny pergola hazo sy tanimanga, antsipirihany vato misy vato, ary varavarana sy varavarankely voaravaka.
Ao amin'ny Hotely Alaia any Chile, fananana 12-suite dia mametraka fotoana fohy monja amin'ny vahiny amin'ny iray amin'ireo toerana fialokalofana ambonin'ilay firenena ny fananana XNUMX-suite iray amin'ny morontsiraka sy fahagagana voajanahary ao aminy. Ny vavahady amam-bato, ny lavarangana panoramika, ary ny faravodilan'ny ala teratany sy ny vatolampy mainty dia mampiavaka an'ity fananana miantra amin'ny ho avy ity. Rehefa miantso ny estetika atsinanana sy ny filozofia momba ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, dia fialan-tsasatra sinoa roa no mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna.
Ao amin'ny mpanao mari-trano Tsingpu Tulou Retreat, Hua Li, ao amin'ny TAO (Trace Architecture Office), dia manasongadina ny dikan'ny toerana amin'ny alàlan'ny fanehoana endrika ivelany izay toa tsy voakitiky ny fotoana. Tsingpu Yangzhou Retreat amin'ny lafiny iray hafa dia tantara mitohy vita amin'ny tononkira notantaraina, nampahafantarin'i Neri & Hu ny fomba vaovao momba ny maritrano nentin-drazana sinoa.
SUNx & Ingle International dia manambara ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiaretana amin'ny toetr'andro SDG-17
Ny FCM dia mifarana amin'ny taona 2018 aorian'ny nandrombahana ny amboara lehibe an'ny World Travel Management Company an'ny World of 8th Running